အမြင့်ကြိတ်စက်ပေါ်လစီ | GlobaliGaming.com Partner Program
အဘယ်သူသည်ငါတို့မဆိုကစားသမားအားဖြင့်ဆိုအပ်ပေးတော်မူလအတွက်ထုတ်ပေးအနုတ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိ, ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေရှင်းလင်းသည်အထိ "High roller" ရှေ့သို့သယ်ဆောင်နှင့်သငျဖွငျ့ရည်ညွှန်းကစားသမားများကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အနာဂတ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေဆန့်ကျင်ထေလိမ့်မည်ခံရဖို့ဆုံးဖြတ်. "High ကြိတ်စက်" အဖြစ်တစ်ဦး Player ကိုခွဲခြားရန်အစံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိရလိမ့်မည်, နှင့်ဤကိစ်စတှငျကြှနျုပျတို့၏တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများပြင်ဆင်ရေး၏လမ်းဖြင့်တူညီသကဲ့သို့သငျဖွငျ့ညှနျးဆိုကစားသမားများ၏အမျိုးအစားသင်အကြံပေးဖို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ကြိတ်စက်မူဝါဒကိုအဆုံးအဖြတ်များအတွက်လက်ရှိစံနှုန်းများများမှာ:
HR1. if in any given monthaplayer generates negative commission revenue of at least €5,000, နှင့်လတွင်စုစုပေါင်းကော်မရှင်ဝင်ငွေ (အလောင်းကစားရုံများအတွက်) က Affiliate ဘို့အနုတ်, ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သော Player ကိုတစ်ဦးအမြင့်ကြိတ်စက်ဖြစ်မှတ်ယူရမည်;
HR2. အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့လျှင် (7.4.1) ထို့နောက်အမြင့်ကြိတ်စက်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အနုတ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေရှေ့သို့သယ်ဆောင်နှင့်အမြင့်ကြိတ်စက်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အနာဂတ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေဆန့်ကျင်ထေလိမ့်မည်;
HR3. ရှေ့ဆက်ထမ်းအနုတ်ချိန်ခွင်လျှာ set-ချွတ်မရနိုငျအခြားကစားသမားဆန့်ကျင်’ အပြုသဘောကော်မရှင်ဝင်ငွေ;
HR4. ရှေ့ဆက်ထမ်းအနုတ်ချိန်ခွင် Affiliate များအတွက်စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းအနုတ်ကော်မရှင်ဝင်ငွေထက် သာ. ကြီးမြတ်မဖွစျနိုငျ, ကလ;
HR5. တစ်ဦးထက်ပိုမြင့်မားကြိတ်စက်ရှိလြှငျ, ရှေ့ဆက်ထမ်းအနုတ်ချိန်ခွင်လျှာသူတို့ကိုအကြားအချိုးကျခွဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်;
HR6. တစ်ဦးအမြင့်ကြိတ်စက်၏အနုတ်ချိန်ခွင်လျှာနောက်ဆက်တွဲလအတွင်းသူတို့ generate ကြောင့်အနာဂတ်အပြုသဘောကော်မရှင်-တတ်နိုင်ဝင်ငွေအားဖြင့်လျှော့ချလိမ့်မည်;